Tivim, Goa, i-India
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Danice
U-Danice unokuphawula okungu-139 kwezinye izindawo.
2 recent guests complimented Danice for outstanding hospitality.
Ifulethi lesimanje elinethezekile elingu-1 BHK endaweni ehlanzekile yesimanje yase-Tivim lapho ungathola khona ukuhlala okuzolile nokunokuthula endaweni enobungane nesikhala esivumelanayo saseNyakatho Goa.
Nizokwamukelwa njengabangani, nihlale njengomndeni futhi niphinde niphile izinkumbulo unomphela. Isikhala sihle kubangani, imibhangqwana kanye nomndeni njengoba siza negumbi lokuhlala eline-balcony enamathiselwe isikhathi eside.
Sethula kuwe ifulethi elithokomele ku-2nd Floor elinekheshi kanye ne-balcony enamathiselwe yegumbi lokuhlala kanye negumbi lokulala futhi elinendawo yokuhlala ukuze mesmerise umbono oluhlaza okotshani ngokungenisa umoya ophambanayo.
Inegumbi lokuphumula elibanzi elinoSofa cum Bed kanye ne-Cable TV. Ikhishi elivulekile linazo zonke izidingo ze-Home-Stay enethezekile kanye neGesi Lokupheka, I-Microwave, Ifriji, I-Mixer nazo zonke izitsha ezidingekayo eziyisisekelo.
I-Bedroom ifakwe umbhede we-Queen kanye nekhabethe elakhelwe ngaphakathi elinendlu yangasese enamathiselwe.
Igumbi Lokulala Elinomoya
I-Invertor enesipele sebhethri
Futhi sine-Swimming Pool eyingqayizivele Yezingane Nabantu Abadala eduze nemvelo lapho ungahlala khona futhi ujabulele ukubhukuda izikhathi ezimbalwa.
4.0(5 okushiwo abanye)
Idolobhana elinokuthula, lesimanje eligcwele izihlahla zikaMangos kanye nekaKhokhonathi, elizolile nokho elixhumeke kahle edolobheni laseMapusa eliqhele ngamakhilomitha amathathu nje kuphela. Inxanxathela inamafulethi angama-55 kanye namaVillas ayi-9 anendawo yokupaka eyanele ngaphandle kwesango kanye nezici zokuphepha ezinjengamakhamera eCCTV. Indawo yokudlela eFine Dining & Super Market imane nje iyiHop-Skip & Jump.
Sibheke ngabomvu ukukubamba njengoba nami ngihlala endaweni eyodwa. Ngizofinyeleleka ngocingo noma mathupha ukuze ngikusize uhlele uhambo lwakho futhi ngiphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo 24/7.
Hlola ezinye izinketho ezise- Tivim namaphethelo